Koox Khatar Ah Oo Boosaaso Loogu Soo Tababaray Been Abuurka Lacagaha Oo Lagu Qabtay Hargeysa | WWW.SOMALILAND.NO
Koox Khatar Ah Oo Boosaaso Loogu Soo Tababaray Been Abuurka Lacagaha Oo Lagu Qabtay Hargeysa
Posted on Maarso 1, 2008 by Abdirisak Fadal
Kooxdani Lacagaha Been Abuurka Ah Ee Ay Samaynayeen Waxa Ka Mid Ahaa Shillinka Somaliland, Birta Itoobiya Iyo Dollar-Ka Maraykanka
Hargeysa(sl.no) – Ciidanka Bileyska Somaliland ayaa qabtay shan nin oo ka tirsan casaabad khatar ah oo been abuurka lacagaha loogu soo tababaray magaalada Boosaaso ee dekeda maamul goboleedka Puntland ee dalka Somalia.
Shantan nin oo la sheegay inay iskugu jireen muwaadiniin reer Somaliland ah iyo kuwo reer Itoobiya ah, waxa ay ciidanka Bileyska Somaliland ka qab-qabteen meelo kala duwan, laba bilood ka hor, ka dib markii ay muddo dheer daba gal ku hayeen. Hase yeeshee, sida wararku sheegeen ciidanka Bileysku waxay weli daba joogaan nin magaciisa la yidhaahdo C/Rashiid Daahir Nuur oo u dhashay dalka Itoobiya oo ahaa ninka keli ah ee Casaabad aanay ciidanka Bileysku qaban.
Nimankan ayaa la sheegay inay haatan ku xidhan yihiin xabsiga Mandheera, waxaana la sheegay inay nimankani ahaayeen kuwo muddo dheer bileyska labada dal ee Itoobiya iyo Somaliland daba gal ku hayeen, ilaa markii ay Boosaaso ka soo baxeen, isla markaana ay soo mareen meelo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta iyo meelo kale.
Sida ay sheegeen wararka aanu ka helnay wardoonka labada dal, lixdan nin waxa ay u isticmaali jireen lacagta been abuurka Printer (qalab wax lagu daabaco) midab leh, waxaanay ku dul sawiri jireen waraaq cad oo adag. Ka dibna suuqa ayay gelin jireen.
Shanta nin iyo qalabkii ay u isticmaali jireen iyo tiro xadidan oo lacagtii been abuurka ahayd ayay ciidamada bileyska Somaliland soo qabteen, iyaga oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Nimankan ayaa la sheegay in aanay meel keli wada deganaan jirin, balse ay marba meel u guuri jireen, iyada oo ay wararku sheegeen inay tageen Boosaaso, Dubai, Hargeysa iyo meelo kale, iyada oo ay intaasi oo dhanba la socdeen sirdoonka labada dal ee Somaliland iyo Itoobiya. Aakhirkii laba bilood horteed ay ciidanka bileyska Somaliland ku guulaysteen inay soo qabtaan shan ka mid ah lixda nin, halka ka kalena ay ilaa imika baadi goobayaan ciidanka ammaanka labada dalba.
Ninka haatan la doon-doonayaa waxa uu deganaan jiray markii hore, magaalada Harta Sheekha, waxaanu ahaa jiray Macalin ka diiwaan gashan Wasaaradda Waxbarashada deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Lacagaha been abuurka noocan ah oo Somaliland, ku cusubi waxa ay xadhkaha goosteen oo lagu sameeyaa maamul goboleedka Puntland ee dalka Somalia, gaar ahaana magaalada Boosaaso, waxaana la sheegay inay xataa ku lug leeyihiin xataa masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi.
Sida ay wararku sheegeen nimankani waxa ay markii hore soo mareen oo ay xarfada been abuurka lacagta ku soo barteen magaalada Boosaaso.
Lacagaha been abuurka ahi waxa ay khasaare aan laga soo waaqsan karin ku hayaan dhaqaalaha bulshada danyarta mandaqada. Khasaaraha dhaqaale kuma koobna oo keli ah dalka lacagtiisa la been abuuray, hase yeeshee wuxuu soo gaadhayaa ilaa halka ugu hoosaysa, tusaale ahaan haddii qof reer miyi ahi magaalada neef u iib keeno oo neefkii lagaga iibsado lacagta been abuurka ah ee Itoobiya, ka dibna lacagtii la ogaado inay foojari tahay, waxa uu ku waayayaa wax uu sannado badan shaqaysanayay oo uu neefkaasi dhaqayay.
Lacagta foojariga ah ayaa la sheegay inay ka khafiifsan tahay ta runta ah, iyada oo lagu soo daabacay Printer (qalab lagu daabaco) midab leh oo qof waliba garan karo, haddii uu hoos u eego.
Baanka Somaliland ayaa hore uga digay lacago been abuur ah oo dalka la soo geliyay oo ka yimid xagga Somalia, laakiin waa markii ugu horeysay ee cid loo xidho, isla markaana ay ciidamada ammaanka ee Itoobiya iyo Somaliland iska kaashadaan arrimahan dhaqaale burburka ku keenaya ummadaha labada dal.
« Waxan Rajeynayaa in Boolisku aanu Imikana Si Khaldan Wax u Qaban HOGAAMIYAHA U KEENA HORUMAR XISBIGA, MAAHA IN SIDII DUMARKA LA YIDHAAHDO WAAN KU WALACNAYE HALA BADALO »